Translate progonitelji from Croatian to Burmese
Results for progonitelji translation from Croatian to Burmese
Sa mnom je Jahve kao snaan junak! Zato æe progonitelji moji posrnuti i neæe nadvladati, postidjet æe se veoma zbog poraza, zbog nezaboravne vjeène sramote.
သို့သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် အားကြီး သော သူရဲကဲ့သို့ ငါ့ဘက်၌ ရှိတော်မူ၏။ ထိုကြောင့်၊ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲသော သူတို့သည် မနိုင်ဘဲ ထိမိ၍ လဲကြ လိမ့်မည်။ အကြံမမြောက်သောကြောင့် အလွန်ရှက်ကြ လိမ့်မည်။ မပြေမပျောက်နိုင်သော ထာဝရရှက်ကြောက် ခြင်း ရှိကြလိမ့်မည်။
အကျွန်ုပ်ကို ညှဉ်းဆဲသောသူတို့သည် အရှက်ကွဲ ကြပါစေသော။ အကျွန်ုပ်မူကား၊ အရှက်မကွဲပါစေနှင့်။ သူတို့သည် စိတ်ပျက်ကြပါစေသော။ အကျွန်ုပ်မူကား၊ စိတ်မပျက်ပါစေနှင့်။ သူတို့အပေါ်မှာ ဘေးအန္တရာယ် ကာလကို ရောက်စေတော်မူပါ။ အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးတော် မူပါ။
Jo im reèe: "Poðite prema gori da vas potjera ne naðe i krijte se ondje tri dana dok se progonitelji ne vrate,aonda idite svojim putem."
caratteristica (Italian>Spanish)penskalaan (Malay>Vietnamese)hükümranlıklara (Turkish>Xhosa)zi (Spanish>Dutch)pregled (Serbian>Estonian)you are stronger than you think (English>Hindi)jadeante (Spanish>Czech)afluisterpraktijken (Dutch>English)electroburst (English>Italian)safety goggles (English>Tagalog)【南昌经转局】已出口互封(国内经转 (Chinese (Simplified)>English)fahrtenschreibersystems (German>Italian)full (Finnish>Danish)description of land (English>Tagalog)napupuno na ako (English>Tagalog)ren (Norwegian>Italian)セキュリティ更新プログラム (Japanese>English)ומסביבות (Hebrew>Russian)kättesaadavaid (Estonian>German)cheval arrêter (French>Dutch)broedgebied (Dutch>French)ad gloriam et porcos (Latin>English)skovrejsning (Danish>Slovenian)quinze heures (French>English)누를이 (Korean>Indonesian)